Laascaanood,20,april,2004-Xaflad Si waanagsan loo soo agaasimay oo looga golahaa sidii xabad Joojinta Ay dhawaan ku dhawaaqeen labada beelood ee uu iska hor imaadku ku dhexmaray Tuulada dabataag loo hirgalin lahaa oo ay ka soo qayb galeen Odayaashii uu hogaaminyey Cadde Muuse iyo Issimada Gobolak SooL, Ayaa maanta ka dhacday magaalada Laascaanood.
Xafladan oo ay Soo qaban qaabiyeen guddida nabadeynta ayna goobjoog ka haayeen Issimada , Guddoomiyaha Gobolaka Ibraahim Jaamac Daad, iyo Taliya qaybta Booliska ee Gobolka Sool C/laahi Maxamed Geele(Farabadane) ayaa markiiba waxaa ka hadlay afar Oday oo labada beelood isk asoo xuleen,oo kala ahaa Caaqil Axmed Xirsi Cawl, Cumar Faruur ,maxmed Xaaji Ismaaciil, Xasan Khaliif. waxayna afartaas odayba ku nuux nuuxsadeen siday uga go�antahay nabada iyo sidii loo adkayn lahaa xabad joojinta, qolawalibana ay u balan qaadi lahayd adkaynta nabada.
Midig Garaad C/qani
Garaad Cali Buraale
Labada Garaad ee labada beelood oo iyagu halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay nabada qaataan.
Garaad C/qani Garaad Jaamac oo hadal kooban ka soo jeediyery madasha shirka ayaa sheegay in aanay labada beelood sina u kala maarmi Karin, iyaga oo waligoodba nabad ku soo dhaqnaa, colaada haatan soo dhex gashayna ay tahay mid aan marna sii socon Karin, labad beeloodna ay laba beelood oo walaalo ah yihiin.
Wuxuuna intaasi ku daray in ay nabad qaateen kagana dhabayn doonaan , maantna wiixi ka danbeeya labada maleesho la kala qaadi doono.
Garaad Cali Buraale ayaa isaguna mahad balaadhan u soo jeediyey Odayaasha ka soo shaqeeyey nabadeyntan iyo xabad joojintan, isaga oo balan qaaday garaadku in ay kaga dhabayn doonaan nabada iyo xabad joojinta ,maantana ay wax alaale iyo wixii labadaa beelood ay isugu calool fayoobaanayaan ay ku talaabsan doonaan.
Garaad Saleebaan Garaad Maxmed oo isaguna ku hadlayey magaca Issimada ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin sida haboon ee ay u fuliyeen balanqaadyadii xabbad joojinta ee ay labad beelood balan qaadeen, wuxuuna intaasi ku daray in lala hubin doono labada beelood sida ay u hirgasho xabad joojintu.
Waxaa isaguna magaca waftiga uu cadde hogaaminayey isaga oo ku hadlay hadal mahadnaq ah ka soo jeediyey madasha Khaliif Ciise Mudan oo sheegay in uu waftigani salaan iyo dhanbaal ka wado Issimada Gobollada Nugaal , Mudug Iyo Barri uguna Horeeyo Boqor Maxmuud, oo isaga Xanuun baajiyey , jeclaase in uu Laascaanood Yimaado, wuxuuna intaasi ku daray in ay shaki ka qabeen in ay yimaadaan Laascaanood oo ay hawsha ay u socdaan Fuli weydo Hasa yeeshee ay hada aad ugu farxeen dhacdooyika ay la kulmeen
Janaraal Cadde muuse oo isaguna halkaasi ka hadlay , kana soo jeediyey hadlo qiimo badan ayaa sheegay in ay ugu horayn uga mahad celinayaan labad beelood sida haboon ee ay ugu dhago nuglaadeen baaqyadii nabada ee loo soo jeediyey wuxuuna sheegay in ay tagi doonaan Goobihii ay mashaqadu ka dhacday , eegina doonaan sida loo fuliyey xabad joojinta ilaa iyo inta ya nabad waarta ka dhex dhalinayaana walaalahooda in aanay ka tageyn deegaanka.
Ugu danbayntii waxaa lagu balamay in maalinta khamiista ah loo anbabaxo tuulada dabataag si nabadan loo gaadhsiiyo hawdka, isla markaana wixii khilaaf ah loo soo afjari lahaa.
Shirkan ooay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tirto badan , isla markaana dalka dibadiisa iyo gudihiisaba aad looga war dhawraayey ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay guul, waxaana duco ku soo xidhay Garaad C/qani Garaad Jaamac, ka dibna waftigii U hogaaminayey Cadde muuse waxaa qado sharaf loogu sameeyey Guriga Garad Cali Buraale.
Asad Caddaani Ibraahim
Laascaanood Puntland Somaliya